We She Me: Apple Pie
မဇနိ - 6/27/08, 12:00 AM
စားစရာမျိုးစုံ ခဏတိုင်းလုပ်စားကြတာ လာလာသွားရည်ကျနေရတယ်ဗျ။ ယောက်ျားလေးတွေ ဟင်းချက်ကောင်းရင် မိန်းကလေးတွေ လိုက်မမှီဘူးလို့ ကြားဖူးတယ်။ ကျွန်မအဖေလည်း ဟင်းချက်ရင် အငွေ့ကို လက်လေးနဲ့ ဟိုရမ်းဒီရမ်းလုပ်ပြီး အနံ့ခံတာ မြင်ဖူးတယ်ဗျ။ အဖေကလည်း ပြောဖူးတယ်။ အနံ့ရယ် အမြင်ရယ်နဲ့ ဟင်းအစပ်အဟပ် တည့်မတည့် သိတယ်တဲ့။ အဖေချက်တဲ့ ကန်စွန်းရွက်ချဉ်ဟင်းနဲ့ ၀က်သားနှပ်ကို အမေလိုက်မမှီဘူး။ ကျွန်မတို့ ကျောင်းကပြန်လာတဲ့ အချိန်မျိုးဆို အဖေက ဟင်းဝင်ချက်ကျွေးတတ်တယ်။ အဲဒီနေ့ဆို ထမင်းစားလို့ သိပ်ကောင်းခဲ့တာဗျ။ ကျွန်မက မုန့်လုပ်နည်းတွေနဲ့ နည်းနည်းဝေးတော့ သိပ်မလုပ်တတ်ဘူး။ မကြိုက်တာကလည်း များတော့ ဟင်းချက်တာကို ပိုဂရုစိုက်ဖြစ်တယ်။ ဒီပို့စ်လေးကိုတော့ သိမ်းထားလိုက်အုံးမယ်။ နောင်များကျ လုပ်စားလို့ရအောင်လို့လေ။ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။
War War - 6/27/08, 7:26 PM
di post ko read pee ko andy toet2yaut lone lat yar tway myee chin lar p.. hee hee.. lar lal yin kyway naw. :P
nu-san - 6/27/08, 9:18 PM
Andy ရေ... ဗိုက်ဆာနေတဲ့အချိန် မုန့်မြင်လိုက်ရလို့လား မသိဘူး.. ဗိုက်ထဲက အသံမြည်လာတယ်.. ကလေးတို့မေမေက မုန့်လုပ်တာ တော်တယ်.. စားကောင်းမယ့်ပုံပဲ။ အချိုမကြိုက်တဲ့ အမတောင် စားချင်လာတယ်.. :)
Andy က ဟင်းကို မြင်တာနဲ့ သိတယ်ဆိုလို့ အမထက်တော့ အများကြီး သာတယ်။ အမက စားလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရုံပဲ ချက်တတ်တယ်။ သူများတွေလို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလည်း မချက်တတ်ဘူး။ သူကတော့ အဆောင်မှာ နေလာခဲ့တဲ့သူဆိုတော့ ကောင်းတယ်ပြောတာပဲ။ မကောင်းလည်း ငတ်မယ်လေ။ သူမှ မချက်တတ်တာ... :P
Anonymous - 6/28/08, 12:30 PM
Myat Noe & Htoo Myat will be lucky to eat home made healthy delicious food coz both Pa Pa & Ma Ma cook and treat. Envy them :) It is interesting to know apple pie is not too much difficult in her hands. Thanksalot for sharing.
Anonymous - 6/28/08, 1:20 PM
အကိုအန်ဒီနဲ့ အမက ဟင်းချက်ရာမှာလည်း အတိုင်အဖောက်ညီကြတာကိုးး)
ဒါနဲ့ ဟင်းချက်ရင် မမြည်းတဲ့နည်းလမ်းတွေ မှတ်သွားတယ်း)
Andy Myint - 6/28/08, 6:15 PM
Chef တွေက ယောက်ျားတွေ များတယ်လေ မဇနိရဲ့ ဟဲဟဲ။ ဒါကလည်း ပြင်သစ်က စတယ်ဆိုလား မှတ်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူး။
ကျွေးမှာပေါ့ ၀ါဝါ။ ကျွန်တော်တို့က ဒီလိုပဲ ချက်ပြီး ခေါ်ကျွေးရတာနဲ့ ပျော်နေတာလေ။ သိပါတယ်။
ကို---ကြီး သနားပါတယ် မနုစံရယ်။ ဟားဟား နောက်တာ။ ဟုတ်တယ် အဆောင်ထမင်းဟင်းကတော့ ပြောမနေနဲ့ ထောင်ထမင်းဟင်းထက် သာတယ် ဆိုရုံပဲ။ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော် (တကယ်တော့ ပြုတ်ထားသလိုပဲ) ထဲမှာ ခရုတောင် ပါလာတယ်။
ထင်ရတာပဲ စာဖတ်သူရယ်။ သူတိုက လူကြီးတွေလို စားတတ်ဦးမှ။ ကြီးလာရင် သူတို့ အကြိုက် အစာတွေ ချက်တတ်အောင် ကြိုးစားထားရဦးမယ်။
မဟာဆန် - 6/28/08, 7:52 PM
Anonymous - 6/29/08, 1:31 PM
အကိုအန်ဒီ .. သွားရည်ရိုသလားမမေးနဲ့ .. ဓါတ်ပုံကိုကြည့်၂ပြီး ခုထိ စားချင်စိတ်မပျောက်လို့ မကြည့်ရဲဖူး အဟီး ။